Strike: I-Scandinavia Airlines SAS malunga nokwala abagibeli abangama-70,000 +
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Strike: I-Scandinavia Airlines SAS malunga nokwala abagibeli abangama-70,000 +
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseDenmark zokuPhula • iindaba • Iindaba zaseNorway zokuPhula • Iindaba zaseSweden eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Bangaphezu kwama-70,000 abakhweli abanokuxakaniseka namhlanje ukubhabha, ukusuka okanye ukuya kwizikhululo zeenqwelo moya eScandinavia. Le yiposti yemithombo yeendaba kwezentlalo yi-CEO ye-SAS uRickard Gustafson. “Ngaphandle kothethathethwano olunzulu kunye nokuzimisela ukuthintela ungquzulwano, ngelishwa asiphumelelanga. Imibutho yabasebenzi abaqhubi beenqwelo moya namhlanje igqibe kwelokuba iye kugwayimbo. ” Iindiza ngamaqabane abelana ngekhowudi azichaphazeleki.
I-Scandinavia Airlines, edla ngokubizwa ngokuba yi-SAS, ngoyena uphethe iflegi yaseSweden, iNorway neDenmark, ezihlangene zenza ilizwekazi iScandinavia. I-SAS sisifinyezo segama elipheleleyo lenkampani, iScandinavia Airlines System okanye iScandinavia Airlines System ngokusemthethweni eDenmark-eNorway-Sweden.
Ulwazi kwiwebhusayithi ye-SAS ithi:
Siyaxolisa ukuba niyachaphazeleka zizitrayikhi zomqhubi wenqwelomoya waseSweden, waseNorway nowaseDenmark okhokelele ekulibazisekeni nasekumiseni iinqwelomoya. Senza konke esinako ukunceda wonke umntu.
I-SAS izama ukufikelela kwisisombululo ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka ukuthintela ukuphazamiseka okongezelelekileyo kubahambi.
Ngaphambi kokuya kwisikhululo seenqwelomoya, nceda ujonge inqanaba lenqwelomoya. Ukufumana ulwazi oluhlaziyiweyo malunga nemeko yezithuthi, nceda undwendwele iwebhusayithi yethu.